लाभांश पारित गर्न एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले बोलायो साधारणसभा, बुकक्लोज कहिले ? - नेपालबहस
लाभांश पारित गर्न एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले बोलायो साधारणसभा, बुकक्लोज कहिले ?
| १०:२८:०८ मा प्रकाशित
२० बैशाख, काठमाडौं । एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेर कम्पनीको २६ औं वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ। कम्पनीले जेठ २ गते सोमबार कम्पनीको केन्द्रिय कार्यलयमा दिँउसो २ बजे सभा बोलाएको हो।
सभामा इन्स्योरेन्सले चुक्ता पूँजीको ८ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि नगद लाभांश समेत वितरण गर्ने प्रस्ताव लैजाने भएको छ।
त्यसैगरी कम्पनीको प्रबन्धपत्रको दफा ३ मा कम्पनीको उद्देश्य अन्तरगत सामुहिक लगानी कोष योजना सञ्चालन गर्ने गराउने व्यवस्था थप गर्ने विशेष प्रस्ताव समेत सभामा लैजादै छ।
निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने उपयुक्त कम्पनीसँग गाभ्ने गाभिने तथा मर्जरको लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने विशेष प्रस्ताव समेत सभामा लैजादै छ।
पठाओ नेपालद्वारा ग्राहक र राईडरहरुलाई बीमा प्रदान गर्न साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षर ४ महिना पहिले
नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आह्वान ५ दिन पहिले
सामूहिक राजीनामाबारे निर्णय गर्न नेपाल समुह छलफलमा ६ दिन पहिले
तीन दशमलव ६९ प्रतिशतले बढेको बजारमा एघार कम्पनीको शेयरमूल्य ९ % बढिले वृद्धि ३ हप्ता पहिले
नेदरल्याण्ड्सविरुद्धको खेलमा नेपालको सानदार जित ४ हप्ता पहिले
सप्तरीमा कोरोनाबाट २४ वर्षीय युवकको मृत्यु २ हप्ता पहिले
माझीले गरिखाने बगरमा कस्ले चलायो डोजर ? ३ महिना पहिले
किसानको करोडौँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको उद्योग सञ्चालनको तयारीमा ७ महिना पहिले
नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु १ वर्ष पहिले
नेकपा भित्र बामदेवको भाउ बढ्यो ! ओली, प्रचण्ड र नेपालको तानातान २ वर्ष पहिले